Trano famoahana maimaim-poana tsara indrindra - TopFillers
Home / Famonoana machinery / Drum Filling Machine
Na inona na inona avy amin'ny tsipika momba ny famolavolana anao no nofidinao: Ny NPACK dia tsy mampisy fahasamihafana amin'ny kalitao miresaka momba ny famenoana valizy, famenoana ny fahamendrehana sy ny famenoana haingana. Ireo singa mitovy ireo dia ampiasaina amin'ny andalana rehetra.
Ny NPACK dia manana karazan-doko isan-karazany amin'ny famenoana baomba, famenoana ny toto, ary famenoana famonoana hafa lehibe ho an'ny palletized ohatra 25 galon barrels, sns. Ireo rafitra fanafody famonosana dia azo atao amin'ny fananganana fiantohana simika sy ny fananganana sakafo ara-tsakafo ao amin'ny top ambony afa-mameno fotsiny (underurface). Tsy dia lafo ny fametrahana ny famolavolana maimaim-poana, fa voafetra amin'ny vokatra tsy simba. Ny fametrahana ny famolavolana ny famenoana ny famolavolana dia rafitra mavitrika be dia be afaka mameno ny ankamaroan'ny vokatra ao anatin'ny karazan-tsavony sy ny viscosities.
Ny roa amin'ireo topa feno ary ambany dia mameno ny rafitra fametrahana ranon-tsavoka dia ampiasaina amin'ny alàlan'ny lamandy lehibe sy milina volavolan-dapan'ny pallet. Ny rafitra dia miasa amin'ny fandraisana anjaran'ny mpandraharaha minitra. Ny mpandraharaha dia mamaritra palette, tote na amponga amin'ny sehatra maitso miaraka amin'ny famantaran-dàlana fanodinana. Ny mpampiasa dia mampiasa ny fitaovana fanamoriana ny fantso fantsom-panafody ho an'ny sariohatra (zero) amin'ny baomba, barotra na fanokafana toto. Ny mpitaona dia manatsara ny fofon-drivotra ary manokatra ny fantsona ary feno ny lanjany.
Ny rafitra mpanangom-bokatra dia azo atolotra amin'ny rafitra napetaka ataon'ny NPACK, na alaina amin'ny rafitra fanodinana volan'ny mpanjifa. Io rafitra io dia manafoana ny ezaka ara-batana amin'ny ankapobeny mifandraika amin'ny fepetra fanondranana 55-gallon.Remote stainless steel NEMA 4x ny fanesorana ny PLC contrôle dia mifandray amin'ny drivotra sy vatomamy azo avy amin'ny tariby mitahiry rano ary ahafahan'ny mpandraharaha miditra sy manara-maso ny toerana fametrahana azy.
Drum Filling Machine, Famonoana machinery
Famaritana momba ny famokarana solika fitrandrahana solika: Ny dingana arahin'ny mpiasa: @ ilay mpandraharaha mametraka ny baomba amin'ny mpanofa @The mpanafika dia mampifanitsiana ny fantsona mankany amin'ny baomba @ Ny mpilalao dia manosika ny bokotra "orientation filling" amin'ny voalohany, avy eo dia manindry ny bokotra "manomboka fofom-bolo ", mameno kofehy manidina, manomboka manamboatra automatique @ rehefa tonga eo amin'ny lanjany, manindry ny fanamafisana sy ny fantsom-panafody avy amin'ny tamba-jotra @The operator manosika ny drum Features: @Machine dia manomana dingana telo mameno, manangona haingana, dow miadana mameno, avy eo famenoana mason-tsoavaly. @Material mifandray amin'ny ampahany: sus316 ary miaraka amin'ny sus304 ho an'ny ampahany hafa @Rolling conveyor material: ny vy tsy misy vongana @Vacuum nesorina rafitra, antoka ny ...
Tranobe vaovao misy ranom-boasary misy ranom-boankazo
Main Features 1. Ny loha-tongotra roa feno amin'ny metatra sy ny lanjan'ny singam-bidy ary koa ny loha roa dia afaka miara-miasa na miavaka; 2. Volavolan-tseraseran'ny milina 60mm, 0.6M sy 1.78M lava; 3. Fanamorana fiovan'ny pneumatic; 4. Misy rafitra fakan-drivotra hita ao amin'ny Flange 2; 5. Ny fonony ivelany dia vita amin'ny vy. Fototra fototra 1. Ny seha-pifamoivoizana sy ny lanjany raha toa ka afaka mahatsapa ny terminal monitor amin'ny solosaina avy amin'ny Mettler Toledo avy any Etazonia sy ny rafitra metering. Ary ny modelin'ny metatra dia ny Panther 2000 miaraka amin'ny port serial PS422; 2. Ny fonosana pneumatic dia ny valifaty elektromagnetika US sy ny ...
Fitaovana 1) Ny famenoana fiara fitaterana dia ampiasaina betsaka amin'ny famenoana ny fampiasana solika sy ny kapila kely amin'ny gripa isan-karazany. Izany no ambany-famenoana karazana 2) Avy hatrany subtracting lanjan'ny fitoeran-javatra 3) izay tiany mametraka nofenoina rano lanjan'ny amin'ny famolavolana ny milanja sehatra 4) Avy hatrany no mifehy mameno amin'ny fifadian-kanina, na miadana hafainganam-pandeha mba hisorohana ny fanasan 5) anehoan'i antontanisa tahirin-kevitra, toy ny hanangonany famenoana fotoana sy tanteraka mameno lanja 6) manana mpanonta Output interface tsara 7) mandany USA Medl-Toredo lanjany fitaovana sy ny Sela Mpandray Hafanana Main ara-teknika masontsivana 1) mameno lanja: 50 - 400kg 2) Production fahaiza: 40 - 60 barìka / ora (180kg / barika) 3 ) Hadisoana: ...
200kg Fandefana milina fanontam-batana
FEATURES 1. Famafàna metaly: Mameno avy any ambony. (mety ho vokatra avy amin'ny ambany, bubble control) 2. Modifier amin'ny haino aman-jery: Fomba fanoratana an-tariby, fikolokolo mikarakara switch 3. Fomba fanodinana: Fomba fanodinana tsy misy motera. 4. Ny nomeraon'ny nomerika nomerika amin'ny famenoana ny karazan'asa, dia afaka mamaritra ny fametrahana amina karazana marika maromaro. 5. Ny otopolo dia nesorina, mifototra amin'ny asa fanasan-danja tsy tapaka. 6. Volavolan-tena miala tsimoramora mba hisorohana ny fitsaboana. 7. Amin'ny alàlan'ny manual sy automatique fanaraha-maso rafitra fanaraha-maso micro. 8. Fepetra fanaraha-maso haingam-pahefana roa mba hisorohana ny fandrobana. 9. Miaraka amin'ny fitsaboana mihelina mba hisorohana ny fampiasana tsy ara-dalàna sy hiarovana ny herin'aratra. Fitaovana 20-200kg Fandefasana haingana 40-60drum / ora Fitrosana fitomboana ± 0.1% ...
Drum Rano Mameno Machine Mety amin'ny hamaroan'isa mameno ny simika orinasa, sakafo, fitsaboana orinasa ny rafitra mampiasa plc, mikasika efijery, azo antoka sy azo antoka mameno nozzle sy ny sodina mampiasa haingana efa voavitrana, mety ho any amin'ny fahababoana, ary nanasa Automatic 2-fiovàna famenoana amin'ny avo araka ny marina The mameno Ny fantsom-panafody dia manala azy rehefa tsy tafiditra ao anaty barika Ny fantsom-pamokarana dia mivezivezy rehefa tonga any amin'ny habetsahanao hameno ny lanjany Gross or net filling mode dia azo ampiasaina Afaka mametraka sy mitahiry vondrona 30 ampiasaina amin'ny fampiasana Free mba hametrahana habetsahana fenoina Azo ampiasaina amin'ny fikarakarana samihafa Mameno amin'ny iray ...
Famaritana ny Machine l Model No .: NPACK-1200L1 L famenoana Material: lubricating menaka / Resin / Engine menaka l Mameno Weight: 1000kg / IBC amponga L famenoana fahaiza: 1000L IBC amponga L famenoana marina: ± 0.1% FS (marina miankina amin'ny mety fanitsiana ny miadana sakafo sy ny fahamarinan-toerana sy ny consecutiveness ny rano mba Mitifitra basy l famenoana Speed: 10 IBC amponga / ora (Mitadiava taloha hafainganam-pandehan'ny mamahana ara-nofo, ny hafainganam-pandeha teo aloha ny rano dia tsy maintsy ho 300L / MIN.) l'Fizarana Method: roa ka Fomba fanaraha-maso Feed, famenoana ny ampaham-batana eo ambonin'ny haavon'ny haavony l Material Connector: DN40 Rapid Flange Connector (Manerantany ny famatsian-drano dia tokony ho ambany noho ny 0.6MPa) Machine Details 2.1 ...
Ny ESDF Series 100-1000L azo atao pirinty maimaim-poana
Fampidiran-tsakafo Product Mampirisika ny fomba fiasa maimaim-poana izy mba handrefesana, amin'ny alàlan'ny fanoherana ny alim-pitaovana fanamafisam-peo mba hifehezana ny fanokafana valim-pifamoivoizana, mba hahafantarana ny tanjon'ny tetik'ady famenoana. Amin'ny alàlan'ny fantsom-pamokarana iray eo amin'ny faran'ny seranana fikarakarana, na fanerena ireo fitaovam-piadiana ara-pitaovana voarindra avy amin'ny tank mankany amin'ny milina fanatobiana. Azo ampiasaina ny fitaovana fanasivanana alohan'ny hamenoany antoka ny kalitaon'ny vokatra. Izy io dia manana tombony amin'ny fahombiazan'ny famatsiam-bola sy ny famatsiam-bolo madinika, ampiasaina betsaka amin'ny fikorotanana, ny ranomainty, ny loko, ny asfalt, ny lakaoly, ny loto, ny pétrochemical, ny indostria chemical industries. Tsy vitan'ny hoe mety ihany izany ...
Trano fanafody fanodinana menaka oliva azo avy amin'ny solika fanenitra mpamokatra milina
5L Fanondrahana ny Shampoo